May | 2015 | နည်းပညာပျိုးခင်း | Page 2
Documents of SCN at SP
May 26, 2015 Phyo Lwin Uncategorized
Singapore Polytechnic မှာ Specialist Diploma in Computer Networking တက်ခဲ့တုန်းက သင်ခဲ့ရသော Course ၄ ခုမှ Documents တွေကို http://www.myanmarengineer.org (MEF) မှာ ပြန်ရှယ်ရင်း ဒီမှာလဲ ရှယ်လိုက်ပါတယ်။ လင့်တွေထပ်နေရင်လဲ ပြန်ပြောကြပါဦး။
Semester 1 Computer Communication
Semester 1: Network Server Management
Semester2Computer Networking
Semester2Internetworking
Sound Problem in ASUS U45J
May 26, 2015 Phyo Lwin Windows
ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး။ ရုံးက ကျွန်ပျူတာက နားကျပ်နဲ့ သုံးနေတုန်း အသံမလာတော့ဘူး။ Built-in Speaker မှာတော့ အသံထွက်သေးတယ်။
Register ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ Register ထဲကို ဝင်ဖို့ အတွက် Run ကနေ regedit လို့ ရိုက်ပြီး အိုကေကို ကလစ်လိုက်ပါ။
Search for the one that hasasubkey named “Settings”. This key hasavalue named “ForceDisableJD” withavalue set (probably) to “00”, double click it and change to “FF”
အထက်အတိုင်းလုပ်ပြီး restart လုပ်လိုက်တော့ နားကျပ်ကနေ အသံတော့ ပြန်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားကျပ်တပ်ထားပေမယ့် built in speaker မှာရော အသံက လာနေတယ်။ အဲဒါနဲ့အထက်အတိုင်း register ကို ပြန်ဝင်ပြီး FF ကို 00 ပြန်ပြောင်းလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။
ဘာလဲတော့မသိဘူး။ တိုင်ပတ်သွားတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အတွေ့အကြုံတော့ ရသွားတာပေါ့။
Power Supply ကောင်းမကောင်းစစ်ချင်ရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ power cable တွေအားလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံထဲကအတိုင်း ဝါယာအတိုလေးရဲ့အစနှစ်ဖက်ကို အစထုတ်လိုက်ပါ။ အပေါ်က ကာဘာကို အကုန်မခွာရဘူးနော်။ ခွာလိုက်လို့ဓာတ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပဲ 😀
ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို connect လုပ်တဲ့ 24 pin connector ရဲ့ Pin ၄ ခုမြောက်က ဝါယာအစိမ်းနဲ့ ၅ ခုမြောက်က အနက်ကို စောစောက ကေဘယ်အတိုလေးနဲ့ ချိတ်ပြီး ပါဝါဖွင့်လိုက်ပါ။ power supply က fan လည်တယ်ဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးသေချာချင်တယ်ဆိုရင် power supply ရဲ့ output voltage ကို Multi meter နဲ့ တိုင်းကြည့်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ power supply ကောင်းမကောင်းသေချာသိနိုင်ပါပြီ။
How to create default Signature in Outlook 2010/2013?
May 26, 2015 June 24, 2015 Phyo Lwin Internet
Outlook 2010/2013 နဲ့အီးမေးသုံးတယ်။ ပြီးတော့ Signature တစ်ခုထဲကိုပဲသုံးတယ်ဆိုရင် အီးမေးအသစ်ပို့တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် forward လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် default signature ကို ဘယ်လို setting ချမလဲ။ လွယ်ပါတယ်။
Outlook ကို ဖွင့်ပြီး New Email ကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် Signature အောက်က မျှားကလေးကတဆင့် Signature… ကို ကလစ်ပါမယ်။
New ကို ကလစ်ပြီး နာမည်တခုခုပေးလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီနာမည်ကို select လုပ်လိုက်မယ်။
Choose Default Signature မှာ outlook မှာသုံးထားတဲ့ အီးမေးအကောင့်ကို မြင်ရပါမယ်။ New message and replies/forwards မှာ စောစောကပေးထားတဲ့ နာမည်ကို ရွေးလိုက်ပါမယ်။ ပြီးရင် Edit Signature မှာ သင်ကြိုက်သလို ပြင်ဆင်ပြီး အိုကေကို ကလစ်လိုက်ပါမယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးပြီးပါပြီ။ အဲဒါတွေပြီးသွားရင် အီးမေးအသစ်ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် replies/forwards လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စောစောက Signature က အီးမေးတိုင်းမှာ ပါနေတော့မှာပါ။